အခု ခေတ်လူငယ်တော်တော်များများက မြန်မာသံဆိုရင် ပျင်းတယ် ဆိုတဲ့ မိုးထက်မြင့် - Yangon Media Group
‘အာ့လာပြောတာ’ တေးစီးရီး နဲ့အတူ ဂီတလောကထဲရောက်ရှိလာ တဲ့ မိုးထက်မြင့်ကို ဒီတစ်ပတ် 10 Minutes ကဏ္ဍမှာ မေးခွန်းတချို့ မေးမြန်းထားပါတယ်။
Q. မြန်မာသံစဉ်ကို ရွေးချယ် ပြီး ဘာလို့ဆိုဖြစ်တာလဲ။
A. မြန်မာသံစဉ်ကို ရွေးချယ် ဖြစ်တာကတော့ ဂီတဆိုတာ တစ် မျိုးတစ်စားတည်းရှိတာပါ။ ခေတ် ဘက်ကြိုက်တဲ့သူက ခေတ်ဘက် ရွေးချယ်ကြတယ်။ မြန်မာသံကြိုက် တဲ့သူကျတော့ မြန်မာသံရွေးချယ် ကြတယ်။ မိုးထက်က မြန်မာသံကို ကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားထဲပါတဲ့အတွက် မြန်မာသံကို ရွေးချယ်ဖြစ်သွားတာ ပါ။
Q. ‘အာ့လာပြောတာ’ကို ဘာ ဖြစ်လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးဖြစ်သွားတာလဲ။
A. မိုးထက် ဒီလောကကို ရောက်ရှိလာတာက မိုးထက်ရဲ့ ကြားဆရာဖြစ်တဲ့ ဂန္ထဝင်တေးသံရှင် ကြီး တွံတေးသိန်းတန်ကို အားကျလို့ သီချင်းဆိုမယ်ဆိုပြီး ရောက်လာတာ ပါ။ ‘အာ့လာပြောတာ’ကို ပေးဖြစ် တာက မိုးထက်ရဲ့ဆရာ သျှန်ထွဏ်း (မြန်မာစာ)က ဒီအကြောင်းအရာ လေးက ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှာလည်း ခေတ် စားနေတယ်။ မြန်မာသံစဉ်ဆိုပေ မယ့် လူငယ်တွေလည်း စိတ်ဝင်စား လာအောင်၊ လူတွေလည်း ဗန်း စကားလေးကြောင့် သီချင်းကို စိတ် ဝင်စားလာအောင်ဆိုပြီး ပေးဖြစ် သွားတာပါ။
Q. မြန်မာသံကို ရွေးချယ်တဲ့ အခါ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ ရလဲ။
A. အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အခု ခေတ်လူငယ်တော်တော်များများက မြန်မာသံဆိုရင် ပျင်းတယ်။ ဆိုရမှာ ကို ရှက်စရာကြီးလို့ မြင်တဲ့သူတွေ လည်းရှိပါတယ်။ အကုန်လုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေ နယ်ပွဲ တွေမှာ သီချင်းဆိုရင်တောင် မြန်မာ သံကြီး၊ ပျင်းစရာကြီး ဆင်းပါတော့ ဗျို့ဆိုပြီးတော့ ကြုံရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာသံကို များသော အားဖြင့် အားပေးတာက နယ်ပရိ သတ်တွေပါ။ ခက်ခဲမှုကတော့ အဲဒါ ပါပဲ။ စတူဒီယိုက အရမ်းမြူးတယ်။ လူငယ်လေးတွေ ကလို့ကောင်း တယ်။ မိုးထက်တို့ မြန်မာသံကျ တော့ အလွမ်းအဆွေးနဲ့ အငြိမ်လေး တွေဆိုတော့ ကခုန်လို့မရဘူး။ လူ ငယ်တွေကိုလည်း အပြစ်ပြောလို့ မရဘူး။ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကတော့ အများကြီးခက်ခဲပါတယ်။ သီချင်း ဆိုတာ ပရိသတ်ကြိုက်အောင် လုပ် ရတယ်။ မြန်မာသံဆိုတော့ လူငယ် ပရိသတ်တွေ အလိုလိုဆုံးရှုံးပြီးသလို ဖြစ်နေတယ်။ လူငယ်တွေ မကြိုက် တာကို ကြိုက်အောင်လုပ်ရတဲ့ အတွက် ပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်။
Q. နှလုံးသားရဲ့ဂီတပန်း တေး စီးရီးမှာ သီဆိုဖြစ်သွားပုံ…
A. တေးရေး နှလုံးသား တစ် ကိုယ်တော်ရေးစပ်ထားတဲ့ တေးစီး ရီးမှာ ပါဝင်ဖြစ်သွားတာကတော့ တေးရေး နှလုံးသားဆိုတာက မိုး ထက်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ် တယ်။ မိသားစု ဝင်တွေလိုလည်းဖြစ် နေတဲ့အတွက် မိုးထက်ရဲ့ဆရာ သျှန် ထွဏ်း(မြန်မာစာ)က တေးရေးနှလုံး သားက မြန်မာသံစီးရီးကို စီစဉ်နေ တယ်။ အဲဒီထဲမှာ မင်းလည်း ပါဝင်ရ မယ်ဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းတာကြောင့် ဆိုဖြစ်သွားတာပါ။
Q. ရွှေဘလာပြီ စီးရီးခေါင်းစဉ် ပေးဖြစ်သွားပုံကရော…
A. မိုးထက်ရဲ့ဆရာ တေးရေး သျှန်ထွဏ်း(မြန်မာစာ)ရဲ့ အိုင်ဒီယာ ပါ။ အတိတ်နိမိတ်လည်းကောင်း အောင် ရွှေဘလာရင် အရာရာ အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူရယ်လို့ ရည်ညွှန်း တာမဟုတ်ပါဘူး။ တေးရေးဆရာ ရဲ့ အိုင်ဒီယာပါ။ ခေါင်းစဉ်လေးက ခံစားမှုရှိတယ်။ အရင်တုန်းက ရွှေဘ ဆိုတာ လူတိုင်းကြိုက်ကြတယ်။ အခုလည်း ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေး လိုက်ရင် ခန့်သွားမယ်၊ ပရိသတ် သိ သွားမယ်။ ဒီထဲက သီချင်းတွေ ပရိ သတ်နားဆင်ချင်တဲ့စိတ်ရှိလာမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးဖြစ်သွား တာပါ။